Newsofexile.com: भूटानमा कस्तो खुशीयाली मनाइरहेका छन् ?
नजिक पर्‍यो की मर्‍यो... ।”
लामो सास फर्दै.....भर्खरै मात्र छोरी, अमेरिकामा भुटानका प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ ठिन्लेले ”मेरो देशमा गल्लीमा हिड्ने कुकुरहरु पनि खुशियालीमा छन् ।” भन्या छ । के छोरी राष्ट्रिय खुशीयाली कुकुरहरुको मात्र हो ? सोध्न सरकारलाई ? मानवको खुशी लुटेर बर्षनी भारतलाई बेचेको छ त्यसले । त्यसमा पनि घर गाउँको सुरक्षाको निम्ति पालेको मेरो भोटे कुकुरलाई त गोली हानेर मार्ने नीति भएका सरकार अमेरिकामा आएर गोराहरुलाई गाइबस्तु झै गरि घाँस लाउन् पछि परेन्.... थिन्ले । अब नेपाली भाषीहरु म्ाथि गरिएको र भइरहेको घटना सम्बन्धीे निरङ्गकुश सासनमाथि विश्वको विभिन्न अदालतमा रिट जाहेर हुँदैछ ।
त्यतिकैमा हेर छोरी सबै कुराहरु भनेको हाम्रो शक्ति हो । त्यसैले भोलिका दिनमा विजय प्राप्त गर्नेछौं भन्ने विश्वास गर । वर्षा पछि मौसमहरु परिवर्तन भए जस्तै गरि हामीविच पनि विचारहरुको हिसाब किताब भएको छ यसलाई काममा प्रयोग गनुपर्छ । रातको १२ बज्न लागे यहाँ , अब धेरै बेर कुराकानी भयो भने तलाई पनि सरकारले कार्बाही गर्छ राख्छु है फोन, हिन्दुहरुको बडादशैं राम्रोसँग मनाउनु ल छोरी ।
हिजो पनि त्यस्तै थियो । आज पनि...कस्तो राष्ट्रिय खुशियाली रहेछ भुटानमा प्रभु । विदेशी पत्रकारले त चमत्कारले भरिएको छ भुटान राष्ट्रिय खुशीयालीले भन्दै विमोचन गरि हिड्छन् त, तिनलाई लाज लाग्दैन ।
हुन्छ आमा...सबैलाई भन्दिनु देशमा एक चेलीले धेरै दुख खेपेर पनि जवरजस्ती बन्दुकको नाललाई जीवन सम्झेर राष्ट्रिय खुशी मनाइरहेकी छ भनेर ।